PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-11 - Kukhalwa ngenkosi ethelisa izimpohlwa
Kukhalwa ngenkosi ethelisa izimpohlwa
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-11 - IZINDABA - KHETHA SANGWENI
KUBATSHAZWA umhlola wenkosi yaseVulamehlo, eNquthu okuthiwa iphakamise ukuthi abangaganiwe bakhokhe intela yobumpohlo ekubeni umphakathi usukhathele wukukhokhiswa intela ngezinto ezehlukene. Kukhalwa nangemali ekhokhwa abashonelwe enguR600 umphakathi othi awazi ngeyani.
Kuthiwa kweminye imingcwabo kuze kulamule inkantolo enquma ukuthi umuntu angcwatshwe.
Inkosi kuthiwa isuke ishaya phansi ngonyawo, ithi ngeke angcwatshwe kungakhokhiwe.
UMnuz Elliot Nkosi osekomitini lomphakathi elizama ukulwa nale mithetho, uthi abahleli neze kahle endaweni ngenxa yesandla sensimbi abaphethwe ngaso yinkosi. Uthe basanda kubabaza umhlola nje inkosi ithi abantu abangaganiwe kufanele bakhokhe imali njalo ngonyaka eyintela yokuba yimpohlwa.
Kuthiwa inkosi ayinazwelo noma ngabe uyahlupheka noma ungumfelokazi, ifuna imali ngoshova kubona, ithumela izinduna zayo okuthiwa nazo azihleki azithi nsi.
Ithintwa inkosi Thathezakhe Ngobese ngalolu daba, ithe yonke indawo inomthetho wakhona uma kukhona ongahambisani nemithetho akaye kwenye indawo.
“Uma abantu beze enkantolo yenkosi bathola usizo mihla namalanga endaweni yakwaNgobese. Basuke bethi umabhalane wasenkantolo ukhokhelwa ngani?
“Amaphepha nezigxivizo konke kukhokhelwa ngani?’’ kubuza inkosi.
Ithe ngeke izwe ngabantu abasuka emadolobheni bexakwe wukubiza kwempilo bezohlala emakhaya bese befika bashaye imithetho ebhedayo.
Ithe kwayena uNkosi lowo ophakamisa izikhalo wayesuke eHlobane koVryheid futhi abazi ngisho ithuna likayisemkhulu njengoba esezokhuluma ezesigodi sakwaNgobese.
Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZuluNatal, uMnuz Lennox Mabaso, uthe basalinde umbiko.
“Silithumile ithimba lethu ukuthi liyozwa kahle ukuthi kwenzenjani, umphakathi ukhala ngani bese siyabona ukuthi senzanjani,” kusho uMabaso.
U-ANDILE Mxakaza onguFezile emdlalweni wakuMzansi Magic, Isibaya, futhi osebenza njengomlolongi wemizimba yabadlali kwiRoyal Eagles FC ngomunye wabantu ababambe ibhokisi emngcwabeni kaRoger Sikhakhane obengumqeqeshi waleli qembu ofihlwe izolo Etholeni, eWasbank, eMnambithi Isithombe: ROYAL EAGLES FC/ FACEBOOK